Noocyada Dufan ee Jinsiga ah ee Dhirta ah oo Rakhiis ah iibka
Caruusadaha Galmada Dumarka ee Galmada Leh Tayada Sare
Caruusadaha galmoodka dufanku waxay leeyihiin bisado waaweyn iyo dameer weyn. Caruusadaha galmada halkan waxaa loogu talagalay caruusadaha jecel ee raadinaya hilib dheeri ah caruusadaha galmada. Haddii aad raadineyso caruusad jacayl oo macquul ah marka loo eego moodooyinka ugu sarreeya, waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso gabdhaha buuran halkan. Waxaan aaminsanahay in caruusad jirka ka buuxdo ay ku cajab galin doonto, ilaa iyo inta aad ka jeceshahay qaloocaaga dheddigga, markaa waxaad ku jeclaan doontaa caruusadeena aadka u buurnaanta badan. Ma sugi kartaa inaad ku raaxeysato miskaha murqaha adag? Dhaqso oo soo qaado gabadhaada.
Sarah - Model 159CM Aasiya yar Dameer Saafi ah Gabar Maqaar TPE Jinsi Doll
Raleign - 158CM E-cup Big Ass Brown Maqaarka TPE Jinsi Doll
Annabelle - 172CM D-cup WM NO.372 Madaxa Tan Maqaarka TPE Jinsi Doll
Xenia - 158CM Haweeney Dufan TPE Doll Gabar Uur Leh
Sexy TPE Doll Sibyl Tracy Naaso Waaweyn 170CM Wehel Yar Oo Wehel Ah
Dufan Dameer Jaban TPE Doll Brown Indhaha 168CM Daadinta Naasaha Waaweyn Ronald Rebecca
Dibno Laastik Adag Oo Dhiig Ah Marcia Ralph Naas Weyn Elf TPE Jinsiga Doll 168CM Wehel Weyn
Dufan weyn oo firfircoon Pandora Sander lugaha dhaadheer ee maqaarka maqaarka 170CM hay'ad TPE doll
Horyaalka Miisaanka Qaadista Marcia Margery TPE Doll Muruqa Muruqa 163CM Fat Ass
Green Eye Vampire TPE Doll Martina Walpole 158CM Naaso Yar Yar Oo faruuryaha Casaanka Leh
Lifesize Doll Gabar Dheddig Jinsi ah oo Raqiis ah